စီချွမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
စီချွမ် ( 四川 ; ရောမအက္ခရာဖြင့် ဆီချွမ်းသို့မဟုတ် Szechwan ဟု ရေးပါသည်) ကုန်းတွင်းပိတ် ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည် အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး စီချွမ်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့် အရှေ့ဘက်ကျသည့်နေရာများ နှင့် အနောက်ဘက် ကျင်းရှာမြစ်တို့ ကြား၊, သာပါ တောင်တန်း မြောက်ဘက်အထိ၊ ယွမ်ကွေ့ကုန်းပြင်မြင့် တောင်ဘက်အထိ ကျယ်ပြန့်စွာ နေရာယူထားသည်။ စီချွမ်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ ချန်ဒူး ဖြစ်သည်။ စီချွမ်ပြည်နယ်၏ လူဦးရေမှာ ၈၁ သန်းရှိသည်။
စီချွမ်သည်ဟန်မင်းဆက်မှဆင်းသက်သောဘုရင်များ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ ဒုတိယရာစုတွင် ဟန်မင်းဆက် ၏အုပ်ချုပ်မှုယိုယွင်းလာသည့်နောက်တွင်စီချွမ်မြစ်ဝှမ်းသည်တောင်တန်းများနှင့်ဝိုင်းရံထားကာအလွယ်တကူကာကွယ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်လာသည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည်တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ယန်ဇီချိုင့် ဧကရာဇ်မင်း၏အာဏာကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ 
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်၌ တရုတ်ပြည်ခေါင်းဆောင် လျူပေသည် ယီ ပြည်နယ် ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး လျူပျောင့် နှင့် ကျန်လူတို့၏ရာထူးများကို အာဏာဖြင့်သိမ်းယူခဲ့သည်။
၂၆၃ တွင်မြောက်တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကျင်မင်းဆက် သည် ရှူ-ဟန်ကိုတိုင်းပြည်ကို သိမ်းပိုက်ပြီး တရုတ်နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်လမ်းခရီး၌ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဆားထုတ်လုပ်မှု သည် Ziliujing ခရိုင် တွင်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒီကာလအတွင်း ခြောက်မင်းဆက် တရုတ်ညီညွတ်မှုတိုးများကာလ, စီချွမ်မဟုတ်သောဖြင့်လူနေထူထပ်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ ဟန် ၏ရွှေ့ပြောင်းဖို့မရှိစေရန်, တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုလူမျိုး Gelao လူတွေ မှ ယူနန်ပြည်နယ်-Guizhou Plateau ဟန်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြသည်ရှိရာစီချွမ်အင်တုံ, ရန်။
လုအိုရှန်ဘုရားကြီးကို တန်မင်းဆက် (၆၁၈-၉၀၇) အတွင်း တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
485,000.00 80,418,200 ချင်းဒူ မြို့ 54 107418
12,163.16 14,047,625 ဝူဟုံ
4,373.13 2,678,898 ဇိလျူကျင်
7,423.42 1,214,121 သုင်း
12,233.58 4,218,426 ကျန်းယန် ခရိုင်34
5,951.55 3,615,759 ကျန်းယန်ခရိုင်21 3
20,267.46 4,613,862 ဖှူချန်
16,313.70 2,484,125 လီကျိုဝ်
5,323.85 3,252,551 ချွမ်ရှန် ခရိုင်22 1
5,385.33 3,702,847 ရှီကျုင်
12,827.49 3,235,756 ရှီကျုင်
12,479.96 6,278,622 ရွှင့်ချင် ခရိုင်35 1
7,173.82 2,950,548 ဒုင်ဖော် ခရိုင်24
13,293.89 4,472,001 စွေ့ဖင်
6,301.41 3,205,476 ကွမ်အန် ခရိုင်23 1
16,591.00 5,468,092 ထုင်ချွမ် ခရိုင်24 1
15,213.28 1,507,264 ယုချဲန် ခရိုင်26
12,301.26 3,283,771 ပါးကျုင် ခရိုင်23
7,962.56 3,665,064 ယန်ကျန် ခရိုင် 1 2
လျန်ရှန် ယီ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု
တရုတ်အုပ်ချုပ်ရေးကွဲပြားမှုနှင့် romanizations ၏မျိုးကွဲ
စီချွမ်ပြည်နယ် 四川省 SìchuānShěng si4 cuan1 sen3
ချင်းဒူ မြို့ 成都市 ChéngdūShì cen2 du1 si4
ဇီကုင်မြို့ 自贡市 ZìgòngShì
ဖန်ကျိဟွာ မြို့ 攀枝花市 PānzhīhuāShì
လူကျုင် မြို့ 泸州市 LúzhōuShì nu2 zou1 si4
ဒေး မြို့ 德阳市 DéyángShì
Mianyang city 绵阳市 MiányángShì
Guangyuan မြို့ 广元市 GuǎngyuánShì
Suining city 遂宁市 SùiníngShì xu4 nin2 si4
Neijiang မြို့ 内江市 NèijiāngShì nui4 jiang1 si4
လီရှန် မြို့ 乐山市 LèshānShì
နန်ချောင်း မြို့ 南充市 NánchōngShì si2 cong1 lan2
မိုင်ရှန် မြို့ 眉山市 MéishānShì mi2 san1 si4
Yibin မြို့ 宜宾市 YíbīnShì ni2 bin1 si4
Guang'an မြို့ 广安市 Guǎng'ānShì
Dazhou မြို့ 达州市 DázhōuShì
Ya'an မြို့ 雅安市 Yì'ānShì
Bazhong မြို့ 巴中市 BāzhōngShì
ဇီယန် မြို့ 资阳市 ZīyángShì
Ngawa တိဘက်နှင့် Qiang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု 阿坝藏族羌族自治州 အာဘZangzúQiāngzúZìzhìzhōu
Garzêတိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု 甘孜藏族自治州 GānzīZangzúZìzhìzhōu
Liangshan ရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု 凉山彝族自治州 LiángshānYízúZìzhìzhōu
Religion in Sichuan[note ၁]
Buddhism[note ၂] (15%)
Islam[note ၃] (0.1%)
Huanglongရှိနဂါး ဝါဝါ ဘုရားကျောင်း (တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ) ၏အမြင်
တိဘက်အစဉ်အလာ၏ လိထန်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်။
Chengdu, ချင်ချန်ရှန်ရှိ ရှန်ကျင်ဘုရားကျောင်း (Taoist) ၏ပြခန်းတစ်ခု။
Emei တောင်တန်း ၏ဘုရားကျောင်း (တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ) ။
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု စုံလင်ပြီး ရိုးရာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။
စီချွမ်ပြည်နယ်ရှိ ဘာသာစကားများသည်အဓိကအားဖြင့် တရုတ် - တိဘက်ဘာသာစကားသုံးမျိုး၏မိသားစုဝင်များဖြစ်သည်။
စီချွမ်အတွက်ပြောပြီတရုတ်အရှိဆုံးအသုံးများအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ် Sichuanese အဘိဓာန် Mandarin- အဆိုပါတည်းဟူသော Lingua Franca စီချွမ်အတွက် ချုံကင်း နှင့်အစိတ်အပိုင်းများ တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသကြီး ။ စီချွမ်လူမျိုးကိုအများအားဖြင့် တရုတ် ဘာသာစကားပြောအဖြစ်သတ်မှတ်သော်လည်း၎င်းသည် စံတရုတ်ဘာသာ မှအသံထွက်၊ ဝေါဟာရနှင့်သဒ္ဒါတို့တွင်များစွာကွဲပြားသည်။ Minjiang စကား သည်အခြား Mandarin ဘာသာစကားပြောသူများ၏နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။
စီချွမ်သည်၎င်း၏စပ်သောအစားအစာနှင့်ပိုစိုစွတ်သောရာသီဥတုကြောင့် စီချွမ်ငရုတ်သီး ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ စီချွမ်လူမျိုးတို့သည် တရုတ်အစားအစာ များ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအစဉ်အလာလေးပါးတွင်တစ်ခုအပါအဝင်လူသိများသည့်သူတို့၏အစားအစာကိုဂုဏ်ယူကြသည်။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းအစားအစာတစ်ခုမှာပန်းကန်တစ်ခု၊ ပုံစံတစ်ရာ၊ ရာပေါင်းများစွာသောအရသာများနှင့်အရသာရာပေါင်းများစွာပါဝင်သည်။ စီချွမ်အစားအစာ၏အထင်ရှားဆုံးစရိုက်များကိုစပ်လေး၊ ပူ၊ လတ်ဆတ်ပြီးမွှေးသောစကားလုံးလေးလုံးဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ စီချွမ်အစားအစာသည်တရုတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးတွင်ရေပန်းစားသည်။ လူသိများသောစီချွမ်စားဖိုမှူးနှစ် ဦး မှာ Chen Kenmin နှင့်ဂျပန်သားရုပ်သံစီးရီး " Iron Chef " တွင်စားဖိုမှူးဖြစ်သူ Chen Kenichi ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်နာမည်ကျော်စီချွမ်အစားအစာသည် Hotpot ဖြစ်သည်။ ဟော့ပေါ့သည်အရှေ့အာရှအစားအစာများနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည့်တရုတ်ဟင်းချိုဖြစ်သည်။ ဟော့တ်ကိုမီးမွှေးနေစဉ်စားစရာများကိုအိုးထဲသို့ထည့်ပြီးစားပွဲတွင်ချက်ပြုတ်ကြသည်။ ပုံမှန်ဟော့ပေါ့ဟင်းလျာများသည်ပါးလွှာသောအသား၊ အရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ မှိုများ၊ wontons များ၊ ကြက်ဥဖက်ထုပ်များ၊ tofu နှင့်ပင်လယ်စာများပါဝင်သည်။ အဆိုပါချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများကိုများသောအားဖြင့်ငံပြာရည်ဖြင့်စားသည်။
စီပေါင် အစားအစာ၏အကျော်ကြားဆုံးသောဟင်းချက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော ကုန်းဘောင်ကြီးကျော်
Mala စတိုင် Hot Pot
ရောနှောထားသောငံပြာရည်ခေါက်ဆွဲ ( 杂酱面 )
Qincheng တောင်ရှိ ရေတံခွန်များ
စီချွမ်ပြည်နယ်နှင့်ချုံကင်းမြူနီစီပယ်ရှိ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများတွင် -
Dazu Rock Carvings နှင့် Wulong Karst ( ချုံကင်း စည်ပင်သာယာ )
Jiuzhaigou ချိုင့်ဝှမ်း နှင့်သမိုင်းဝင်စိတ်ဝင်စားမှုAreaရိယာ
Leshan Giant Buddha ရှုခင်းincludingရိယာအပါအဝင် Emei ရှုခင်းသာMountရိယာ
Qincheng တောင်တန်း နှင့် Dujiangyan ဆည်မြောင်းစနစ်
စီချွမ်ကုမ္ပဏီကြီး Panda Sanctuaries
↑ Haw၊ Stephen G (2008)။ A Traveller's History of China။ Interlink Books။ p. 83။
↑ ၂.၀ ၂.၁ China General Social Survey (CGSS) 2009, Chinese Spiritual Life Survey (CSLS) 2007. Report by: Xiuhua Wang (2015, p. 15) Archived 25 September 2015 at the Wayback Machine.
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ (in zh-hans) (2011)။ 27 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 May 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tokyo Sentaku [in Japanese]. 1 June 1999. "Cult Groups Seen Shaking Party Leadership" (FBIS-CHI-1999-0614 1 June 1999/WNC). Cited in: ecoi.net, The Tian Dao (Yi Guan Dao, Yiguandao, Yi Guandao) sect and treatment of believers by the authorities Archived9October 2016 at the Wayback Machine.. [CHN32887.E] [ID 171890].
↑ Min Junqing. The Present Situation and Characteristics of Contemporary Islam in China. JISMOR, 8. 2010 Islam by province, page 29 Archived 27 April 2017 at the Wayback Machine.. Data from: Yang Zongde, Study on Current Muslim Population in China, Jinan Muslim, 2, 2010.
ကိုးကား အမှား - <ref> tags exist foragroup named "note", but no corresponding <references group="note"/> tag was found
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စီချွမ်&oldid=698449" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။